We Fight We Win. -- " More than Media ": Burmese workers news in Malaysai
Burmese workers news in Malaysai
မလေးရှားနိုင်ငံအတွင်း အသတ်ခံရသူ မြန်မာငါးဦး နာရေးအတွက် မြန်မာလူမှုကူညီရေးအသင်း (မလေးရှား) မှ အလှူခံ ...
၁။ မင်းဇော် passport မရှိ ၃၀-၅-၂၀၁၃ သေဆုံးခဲ့ပါသည်။
မရှိသေးပါ။ အလောင်းမှာပုတ်ပွာလာမှုများရှိနေပါပြီ။ )
၂။ ဝင်းခိုင် passport မရှိ ၃၁-၅-၂၀၁၃ သေဆုံးခဲ့ပါသည်။
၃။ ကိုဝင်းလှိုင် passport ရှိ စာရွက်စာတမ်း မပြည့်စုံ ၂-၆-၂၀၁၃ ရက်တနင်္ဂနွေနေ့က ကိုဝင်းလှိုင်သေဆုံးခဲ့ပါသည်။
၄။ အမည်မသိ ပုဆိုးဝတ်ထားသူ မြန်မာတစ်ဦး passport မရှိ ၇-၆-၂၀၁၃ သေဆုံးခဲ့ပါသည်။
၅။ စောဘာဗလူဂေ passport ရှိ စာရွက်စာတမ်း မပြည့်စုံ ၈-၆-၂၀၁၃ ရက်နေ့တွင် သေဆုံးခဲ့ပါသည်။
၄င်းတို့ ( ၅ )ဦးကို သင်္ဂြိုလ်ရန်အတွက် အခက်အခဲရှိနေပါသည်။
အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်ခြင်းခံရ၍ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရိုသူများ
အတွက် ဆေးဝါးကုသရန် လှူဒါန်းလိုသူများ အောက်ပါဖုံန်းနံပါတ်များသို့....................
ဆက်သွယ်နိုင်သောဖုန်းနံပါတ်များ = ၀၁၆ ၉၉၂၉၄၅၅ / ၀၁၇၆၈၀၁၅၀၉ / ၀၁၆၂၇၂၃၄၅၅ /၀၁၆၂၁၁၄၆၉၅ / ၀၁၆၉၀၉၆၉၂၆ / ၀၁၆ ၃၄၉၃၀၃၇ =သို့ဆက်သွယ်လှူဒါန်းနိုင်ပါသည်။
- မြန်မာလူမှုကူညီရေးအသင်း ( မလေးရှား )
Ko Moe Thee probably supports killing of Myanmar innocent people by Malaysian Muslim because there is no condemnation from Ko Moe Thee to Malaysian Muslim. What'sadisgusting people?